Semalt: Nheyo dzePePePress Types Iwe Unoda Kuziva Nezve
Kusarudza chinyorwa chakarurama cheShokoPress ndechimwe chezvisarudzo zvakaoma iwe uchaita nokuda kwewebsite yako kana blog. Chimwe chezvinhu zvakanakisisa zveShokoPress zvinyorwa ndechokuti iwe unogona kupa unyanzvi uye unotaridzika kutarisa kune yako yepaiti uye haufaniri unyanzvi hupi hwokugadzira kana kugadzira webhusaiti. Izwi rePeoplePress rinosiya pfungwa yakanaka yehutano hwako kune vaverengi uye shandura nzira iyo mawebhu ako ewebhu akashandurwa. Nyaya dzinogona kuita nzvimbo kana mabhugi zvakasiyana nezvinoita nyore.
Kunze kwekutarisa kutarisa kwesaiti yako kana bhulogi, shanduro dze WordPress dzinoita basa rinokosha kana guru muSeO (search engine optimization). SEO inzira yekuvandudza kana kukurisa nzvimbo yako kana bhulogi kuitira kuti iite zvakanaka mumapeji ekutsvaga emagetsi ekutsvaga (SERPs) - com amazon tool. Google, Bing, uye Yahoo vanosarudza mawebsite ane masheji makuru uye anovaisa kune zvakasiyana-siyana zvemashoko makuru. Iwe unogona kuita mari yako yepaiti nyore nyore uye unogona kutyaira yehughijini mukati mevhiki.
Oliver King, nyanzvi inotungamirira Semalt , inotsanangura kuti pane mitatu mikuru yemitambo ye WordPress:
Mashoko ekutanga eWebsitePressPress ari ehupamhi hwepamusoro uye yakagadzirwa nevanyori vakakurumbira kana makambani makuru. Iwe unofanirwa kubhadhara chimwe chinhu kuti uwane iyo zvidzidzo, majekeri, menus, uye zvose zvasarudzo. Mitambo yepamusoro yepamusoro inotitorera chimwe chinhu kubva pa $ 50 kusvika ku $ 500 pa webhusaiti uye ine mvumo..Vanopa zvipo zvinotevera kune mawebsite:
SEO yakaitwa nyore
Shandisai zvakakwirira, zvikuru uye zvekupedzisira webhu (28)
Mitambo yepamukuru yakanyatsogadziriswa uye inoita zvakanaka
Vanonyatsoshandiswa kupfuura zvinyorwa zvisingabhadhari uye vanopa rubatsiro rwakakwana kuvashandi
2. Free ThemesPress Themes:
Zvakachengeteka kutaura kuti pane zviuru zvemashoko eWespress pasina paIndaneti. Chikamu chakanakisisa ndechokuti haufaniri kubhadhara chero chinhu chipi zvacho kuti uwane zvinyorwa uye unogona kuisa nekuvashandura pakarepo. Izvi zvinyorwa zviripo mumutauro weSpanish Wordpress uye unouya mumhando dzakasiyana-siyana, maitiro, uye zvirongwa. Chimwe chezvinyorwa zvakanyanya zvemashoko akasununguka ndezvokuti hazvigone kukubatsira kuti uwedzere webhusaiti yako nenzira iri nani. Vashandi vekugadzira vakagadzira zvinyorwa uye vakaita kuti zviwanike paIndaneti, asi kune zvishoma zvingasarudzwa kuti zvibatsirwe.
Sezvo zvinyorwa zveShokoPress zvine ruzivo rwakanyanya pane webhusaiti yako, SEO, kuwedzera kwehuwandu, kushanda kwayo, uye kukwanisika kweblogiti yako, unofanira kusarudza zvidzidzo zvekutanga kune zvinyorwa zvemashoko zveSpanish. Kana iwe usina mari yakakwana kutenga zvidzidzo zvekutanga, unogona kuedza makumi maviri nemakumi maviri nemaviri kana makumi maviri nemakumi maviri nemaviri, ayo ari maviri ehurukuro dzakasununguka dzeShokoPress.
3. Mhando dzeShokoPress Themes:
Tsika dzeShokoPress dzinonyanya kuzivikanwa nekuonekwa kwavo kwakasiyana uye kwakanyanyisa. Izvi zvinyorwa zvinoda kuti iwe uwane nzvimbo dzekutsvaga muIndaneti uye uine zvimwe zvazviri. Mhemberero dzetsika dzakagadzirirwa nzvimbo dzezvesheni kana mabhii nevanokurudzira uye vanogadzira zvinopesana nemari inorema. Vanopa mikana yakawanda yekusarudza uye kuchinja, asi izvo zvikamu zvisingakwanisi kune vashandisi vakabhadhara mari yavo.
Chimwe chezvinhu zvakakosha ndezvekuti zvinyorwa zvetsika zvakadhura, zvichibva kumadhora mazana matanhatu kusvika ku $ 6 500 zvichienderana nehupi hunyanzvi uye mukurumbira muumbi. Iyo mienzaniso yakanakisisa ndiyo imba yeRose custom theme uye Side Income custom theme.